Dagaal Khasaara Lagu Gaarsiiyay Ciidanka Jabuuti oo ka dhacay Duleedka Degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan.
Tuesday May 26, 2015 - 18:30:16 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaadka Jabuuti ee xoogga ku jooga qeybo katirsan gobolka Hiiraan ayaa ku fashilmay isku day ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan deegaan dhaca duleedka degmada Buula Barde.
Maanta duhurkii ayay ciidamo ka amabaxay degmada Buula Burde waxay gaareen dhanka tuulada Ceel-bacad oo qiyaastii 20KM dhanka Bari uga beegan degmada halkaasi waxaa gacanta ku haya xarakad shabaabul Mujaahidiin.
Wararka ka imaanaya Bariga Buula Burde ayaa sheegaya in dagaal saacado badan qaatay uu dhaxmaray ciidamadii colka ahaa ee dhanka Buula Burde ka duullaan tegay iyo xoogaga mujaahidiinta.
Wariye Nuur Cali Warsame oo Hiiraan ku sugan ayaa soo sheegay in maleeshiyaadka DF-ka iyo ciidanka Jabuuti ay dib ugu laabteen halkii ay kasoo duullaan tageen kadib iska caabin adag oo ay mujaahidiinta kala kulmeen.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in 5 askari oo cadawga katirsan lagu dilay dagaalka,wararkii ugu dambeeyay ayaasheegaya in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay u hareen gacan ku heynta deegaanka Ceel Cadde.
Ciidamada Jabuuti iyo maleeshiyaadka la socda ayaa hareerayn adag ku wajahaya degmada Buula Barde ee gobolka Hiiraan.